नेपाली रु २८.४९ लाखमा द अल न्यू रेनो काइगर सुरु हुँदै, बुकिंगहरु आजबाट खुल्दै « Artha Path
नेपाली रु २८.४९ लाखमा द अल न्यू रेनो काइगर सुरु हुँदै, बुकिंगहरु आजबाट खुल्दै
रेनो काइगर चारवटा ट्रिमहरुमा उपलब्ध हुनेछ–आरएक्सई, आरएक्सएल, आरएक्सटी र आरएक्सजेड। एलईडी डीआरएलहरु, सी–आकारको सिग्नेचर एलईडी टेल ल्याम्पहरु, ४०.६४ सेन्टिमिटरको पांग्राहरु, रुफ रेलबारहरु र डुअल टोन अप्सनको उपलब्धता सबै ट्रिमहरुमा हुनेछ ।
रेनो काइगरको नेपाल भर रेनोको १५ वटा सेल्स आउटलेटहरुमा पुगेको छ , टेस्ट ड्राइभहरु शोरुमहरुमा उपलब्ध हुनेछन् ।
रेनो काइगर स्टनिंग डुअल टोन संयोजनको साथ ६ वटा एक्साइटिंग बडी रंगहरुमा उपलब्ध हुनेछ ।
स्टनिंगः डिस्टिन्क्ट,एथलेटिक डिजाइन र अर्बान मोडर्निटी अनि एजिलिटी र मस्कुलर बडीवर्कलाई जोडेर जसले स्टर्डिनेस र डाइनामिजमलाई एक्सुड गर्दछ ।
स्मार्टः टेक्नोलोजी,फंशनालिटी र र रुमिनेशलाई जोड्ने स्मार्ट केबिनका साथ रेनो काइगरले सीएमएफए+ प्लेटफर्ममा नवीनतम प्रविधिको सुविधाहरु ल्याउँदछ जसले सेग्मेन्ट लिडिंग रुमिनेश,केबिनको स्टोरेज र कार्गो स्पेशको साथ ट्राइबरको सफलताको लागि आधार तयार गर्दछ ।
स्पोर्टीः मल्टी–सेन्स सेटिंग्सले विभिन्न ड्राइभिंगको मोडहरु–नर्मल, इको र स्पोर्टस रोज्न अफर गर्दछ । इन्जिन म्यापिंग, गियर परिवर्तनहरु (अटोमेटिक ट्रान्समिशनको लागि), रेस्पन्सिभ स्टिरिंग कलम र डिजिटल स्पिडोमिटर त्यस बेला रिसेट हुन्छ जब ड्राइभिंग मोडहरु इष्टतम ड्राइभिंग एक्सपेरियन्सको लागि परिवर्तन हुन्छन् ।
डिस्रप्टिभ इनोभेसनको आफ्नो वचनलाई अगाडि बढाउँदै रेनो नेपालले आज द अल–न्यू काइगरको मूल्य निर्धारण नेपाली रु २८. ४९ लाख (सम्पूर्ण नेपालको एक्स शोरुमहरु) मा घोषणा गरेको छ । यस उत्कृष्ट मूल्य निर्धारणको साथ, रेनो काइगरले निश्चित रुपले कम्प्याक्ट एसयुभी सेग्मेन्टमा गतिशिलता परिवर्तन गर्ने निश्चित रहेको छ ।
रेनो इन्डिया अपरेशनका कन्ट्री सीईओ र प्रबन्ध निर्देशक भेन्कट्राम ममिलापल्लेका अनुसार “रेनो काइगर आधुनिक एसयूभी हो जुन बजारका लागि पर्फेक्ट फिट हो । यसले हाम्रो इनोभेसन, क्रियटिभिटी, कस्टोमर अन्डरस्ट्यान्डिंग र सबै भन्दा माथि हामो ध्यानलाई गाडीहरु बनाउनमा एक बेजोड मूल्यको प्रस्ताव गर्न केन्द्रित गराउँदछ । रेनो काइगरमा विशिष्ट एसयूभीको लुक छ र यसको लामो व्हीलबेसले बोर्डमा ठूलो ठाउँ र मात्रा ओगट्न मद्दत पुर्याउँछ । धेरै स्मार्ट गुणहरु सहितलोड रहेको काइगरले हाम्रो एसयुभीको लिगेसीलाई सुदृढ पार्नेछ र यसको लन्चको साथ हामी रेनो परिवारमा अधिक ग्राहकहरुलाई स्वागत गर्न तत्पर छौँ ।”
विशाल ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निकुञ्ज अग्रवालले भन्नुभयो, “नेपालमा रेनो काइगर सबैभन्दा बढी मागका साथ धेरै प्रतिक्षा गरिएको गाडी हो । हामी हाम्रा ग्राहकहरुलाई रेनो काइगरको आगमन बारे सूचित गर्न पाँउदा निकै खुसी छौँ । हामी रेनोकाइगरको स्टनिंग डिजाइन र आधुनिक संगै स्मार्ट सुविधाहरुले आफ्ना अपेक्षाहरु पूरा गर्नेछ भन्ने कुरामा आशावादी छौँ । ग्राहकहरुको विस्तृत सेटको बढ्दो एसयूभीको आकांक्षा पूरा गर्ने दृष्टिकोणको साथ हामीले रेनो काइगर आकर्षक मूल्यको रहेको कुरा सुनिश्चित गरेका छौँ र हामी यस न्यू गेम चेन्जरको साथ हाम्रो एसयूभीको लिगेसी सुदृढ पार्न लागि पार्नेछौँ ।”
डुअल टोनको विकल्पहरु सबै भेरियन्टहरुमा अतिरिक्त नेपाली रु ५०,००० मा उपलब्ध हुनेछ ।
काइगर गाडीको डिजाइन काइगर शो–कार द्वारा प्रेरित गरिएको थियो जुन २०२० सालको अन्त्यमा लन्च गरिएको थियो । स्कल्प्टेड बोनेटले गाडीको पर्शन्यालिटीलाई इम्प्रेसिभ बम्परका साथ बढाउँछ । विंग्सहरुले आफ्नो प्रनाउन्स्ड सोल्डर लाइन्सका साथ डिजाइनलाई बढाँवा प्रदान गर्दछ र कालो सिल्स र ह्विल आर्चहरुले थप सुरक्षा प्रदान गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स (२०५ मिलिमिटर) र फंशनल रुफ बारहरुले गाडीको सिल्हूट बढाउँछन् र यसको बोल्ड एसयुभी लुकलाई अझै आकर्षक बनाउँछ ।
रेनोका डिजाइनरहरुले काइगरलाई धेरै सुविधाहरु सहित सुसज्जित गरेका छन् जसले गाडीलाई स्पोर्टी लुक दिन मद्दत गरेको छ । फ्रन्ट ग्रीलको थ्री ढी ग्राफिक फिनिसले हनीकम्ब–आकारको क्रोम्ड इफेक्टको साथ एक पर्फेक्ट उदाहरण हो । एलुमिनियम फिनिस स्किड प्लेटले रियर बम्परलाई अझै राम्रो बनाउँछ । बुट ढोकाको स्लोपिंग र स्पोर्टी रियर विन्डो, इन्टिग्रेटेड स्पोइलरले काइगरका एरो डाइन्यामिक सिल्हूटलाई अझै राम्ररी दर्शाउँछ ।
काइगरको हाई, वाइड सेन्टर कन्सोलमा ठूलो २०.३२ सेन्टिमिटरको फ्लोटिंगटच स्क्रिन केन्द्रित रहेको छ जसले एप्पल कारप्ले र एन्ड्रोइड ओटोको लागि उच्च ट्रिममा वायरलेस स्मार्ट फोन रेप्लिकेसन प्रस्तुत गर्दछ। वायरलेस स्मार्ट फोन रेप्लिेकेसनले यात्रीहरूलाई आफ्नो स्मार्टफोनहरू कुनै चीज बिना जोड्न र विशेष ड्राइभिंग गरिरहेको बेलामा मल्टि मिडिया एप्लिकेसनहरु प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ । यात्रीहरूले एप्लिकेसन र सुविधाहरूमा द्रुत पहुँचका लागि पाँच स्थायी सर्टकटहरू चयन गर्न सक्दछन्। प्रणालीले एप्पल कारप्ले र एन्ड्रोइड ओटो मार्फत आवाज मान्यता मात्र प्रदान गर्दछ साथै ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी पाँच उपकरणहरू सँग जोड्न सकिन्छ र छिटो चार्जको लागि यूएसबी सकेट र बिल्ट इन भिडियो प्लेयर रहेको छ ।
उच्च ट्रिम स्तरहरूमा, ड्राइभरले बहु ड्राइभ मोडहरू चयन गर्न मल्टी सेन्स सेटिंग्समा पहुँच रहेको छ। इन्जिन म्यापिंग, गियर परिवर्तन (अटोमेटिक ट्रान्समिसनको लागि), रेस्पन्सिभ स्टिरिंग कलमर डिजिटल स्पीडोमीटर ड्राइभ मोड परिवर्तन गर्दा अप्टिमम ड्राइभिंग एक्सपेरियन्सका लागि रिसेट हुन्छ ।
मल्टी स्किन १७.७८ सेन्टिमिटरको रिकन्फिगुरेबल योग्य टीएफटी क्लस्टरले यसको रंग र विजेट कन्फिगुरेसनलाई परिवर्तन मोडको अनुसार चयनित ड्राइभिंग मोडसँग सान्दर्भिक उपयोगी जानकारी प्रदर्शित गर्दै परिवर्तन गर्दछ ।
नर्मल मोडः सिटी ड्राइभिंग कन्डिसनहरूको लागि इन्जिन अप्टिमेटिम ड्राइभिंग प्यारामिटर प्रदान गर्दछ । यसले वास्तविक जानकारी र औसत ईन्धन खपत जस्ता उपयोगी जानकारी सबै निलो रंगको लुकमा प्रदान गर्दछ ।
इको मोडः इकोनोमिक ड्राइभिंग प्राक्टिसेज तिर मोडिदै यसले ड्राइभ प्रदानगर्दछ । टीएफटीको समग्र उपस्थितिलाई हरियो रंगमा परिवर्तन गर्दै, इन्डिकेटरहरू, एनिमेटेड लिफ जस्तो इकोनोमिक ड्राइभिंगमा म्याक्सिमाइज गर्नयसले रियल टाइम फिडब्याक प्रदान गर्दछ।
स्पोट्र्स मोडः रमाईलो र खेलकुदले भरिपूर्ण रहेको क्रिस्पर ईन्जिनरेस्पन्स र फास्टर सिफ्टिंयको साथयसले एक ड्राईभिंग वातावरण प्रदान गर्दछ छ। समग्र टीएफटी स्क्रिन एपियरेन्स एसिलिरेसन गज, टर्क/पावर रेसियो आदि को द्रुत जानकारीको साथ यसले ड्राइभरहरूलाई सबै रमाईलो प्रदान गर्दछ!
अर्को ट्रिम स्तरमा उपलब्ध नयाँ सुविधा भनेका यात्री कम्पार्टमन्टमा वाइट एम्बियन्ट लाइटनिंग हो। यसले सेन्सर कन्सोलको अगाडि र ढोकाको पछाडि ग्रिप ह्यान्डलहरूको अगाडि स्टोरेज कम्पार्टमेन्टलाई उज्यालो बनाउँछ।
अनबोर्डमा दुई फ्रन्ट सिट र दुई रियर सिट तीन–पोइन्ट सिटबेल्टका साथ सुसज्जित रहेका छन् भने रियर मिडल प्यासेन्जर सिटमा दुई–पोइन्ट सिटबेल्टको सुविधा रहेको छ । ड्राइभर र फ्रन्ट–सिट यात्रीहरुको लागिदुई फ्रन्ट एयर ब्यागहरुका साथसाथै सेफ्टी सुट र दुई साइड एयरब्यागको सुविधा रहको छ । दुवै फ्रन्ट सिटहरुमा इन्ह्यान्स्ड सेफ्टीका लागि सिट बेल्ट रिमाइन्डर एलर्टको सुविधा पनि रहेको छ ।